ပုဒ်မ ၅၀၅(က)သုံးကြိမ်အထုတ်ခံရတဲ့ BIG BAG(ခ)ကျားပေါက်(ခ) ဟန်ထူးလွင်…. – Sport Gaber
ပုဒ်မ ၅၀၅(က)သုံးကြိမ်အထုတ်ခံရတဲ့ BIG BAG(ခ)ကျားပေါက်(ခ) ဟန်ထူးလွင်….
ကျားပေါက်ဟာ လတ်တလောမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျန့်တာကြောင့်ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အထုတ်ခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လိုင်းပေါ်မှာပျံနှံနေသည့်ပုံမှာ ပုံအဟောင်းသာဖြစ်ပြီး ၅၀၅-ကဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသူမို့ ပိုမိုအနေအထိုင်ကြပ်စေပါတယ်”လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတင်္ယမကြောက်လို့ရမလား သားကြီး သူတို့လက်ထဲမှာ ဗျောက်တွေနဲ့ ၅၀၅-သုံးကြိမ်အထုတ်ခံရတဲ့ Big Bag(ခ)ကျားပေါက်(ခ)ဟန်ထူးလွင်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတင်္ယကျားပေါက်ဟာ လတ်တလောမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျန့်တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အထုတ်ခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျားပေါက်ဟာ လတ်တလောမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျန့်တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အထုတ်ခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျားပေါက်ဟာ လတ်တလောမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျန့်တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အထုတ်ခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လိုင်းပေါ်မှာပျံနှံနေသည့်ပုံမှာ ပုံအဟောင်းသာဖြစ်ပြီး ၅၀၅-ကဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသူမို့ ပိုမိုအနေအထိုင်ကြပ်စေပါတယ်”လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတင်္ယမကြောက်လို့ရမလား သားကြီး သူတို့လက်ထဲမှာ ဗျောက်တွေနဲ့ ၅၀၅-သုံးကြိမ်အထုတ်ခံရတဲ့ Big Bag(ခ)ကျားပေါက်(ခ)ဟန်ထူးလွင်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတင်္ယ CRD: Ownerကျားပေါက်ဟာ လတ်တလောမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျန့်တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)အထုတ်ခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လိုင်းပေါ်မှာပျံနှံနေသည့်ပုံမှာ ပုံအဟောင်းသာဖြစ်ပြီး ၅၀၅-ကဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသူမို့ ပိုမိုအနေအထိုင်ကြပ်စေပါတယ်”လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတင်္ယမကြောက်လို့ရမလား သားကြီး သူတို့လက်ထဲမှာ ဗျောက်တွေနဲ့ ၅၀၅-သုံးကြိမ်အထုတ်ခံရတဲ့ Big Bag(ခ)ကျားပေါက်(ခ)ဟန်ထူးလွင်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကရကစ်
ဇွန်လဆန်းမှာ အခြေအနေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ခန့်မှန်းထား ……